FAMPIHARANA | - Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd.
Fantsom-pambolena alimina amin'ny fambolena
Talantalana mitombo holatra
Maka sehatra holatra alimina alimina
Modely momba ny fihodinan'ny alimika fiaramanidina
Toolbox Aeronautika Alloy Aluminium
Trolley finday aliminioma
Aluminium Alloy Mobile Platform
Fitaovana fanaovana firaka aluminium
Tantaran'ny firaka aliminioma
Pallet firaka aluminium
Fitaovana fanaovana firaka aliminioma ho an'ny karazan-fiara isan-karazany
Voadona firaka aluminium
Indostrian'ny milina fananganana orinasa aluminium
Fiarovana amin'ny firaka aliminioma
Tohatra alika aluminium
Vokatra Aluminium Indostrialy Sakafo Sakafo
Fampiharana marobe amin'ireo vokatra vita amin'ny alimina Caixin
Tsindrio raha hijery
Amin'ny maha fiara fitaterana andraikitra mavesatra an'ny XCMG Group dia vokatra firaka vita amin'ny aliminioma hatrizay nomen'i Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd., toy ny lampihazo firavaka aliminioma, sobika mihantona alimo aluminium, tohatra firaka vita amin'ny alimo, alim-by alimo aluminium, aluminium dingana firaka, sns Vokatra firaka. Fanamarinana rafitra fitantanana isan-karazany mba hiantohana ny kalitao; ISO9001: fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao 2015, ISO45001: fanamarinana ny rafitra fitantanana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny asa, ISO14001: 2015 ny mari-pahaizana momba ny fitantanana ny tontolo iainana, ny mari-pahaizana momba ny patanty modely, ny fanamarinana ny orinasa SGS, sns.
Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. dia manodina sy mamokatra fiara elektrika, faritra misy fiara, boaty fanovozam-bokatra, sns.. Ny fantsom-pifamoivoizana vita amin'ny aliminioma natolotry ny orinasa ho an'ny mpanjifa dia niara-nidera; ny R&D sy ny mpamorona ny orinasa dia manana traikefa manan-karena sy fahalalana matihanina hanomezana ny mpanjifa vahaolana famolavolana tsaratsara kokoa.
Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. dia mamokatra boatin-drivotra sy sarety misy rivotra izay noraisin'ireo mpanjifa tsara. Ireo mpiasa dia manana traikefa amin'ny asa manankarena, endrika endrika kanto sy tsara tarehy, famolavolana lasantsy sy fanangonana, ary mamokatra vokatra firavaka aliminioma avo lenta ho an'ny mpanjifa.
Ny hakitron'ny alimina, ny tanjaka avoakany, ny fahamendrehana avo lenta ary ny fanoherana ny harafesina dia mahatonga ny sambo aluminium ho maivana kokoa noho ny sambo vita amin'ny vy na fitaovana hafa. Izany dia afaka mampihena ny lanjan'ny sambo sy ny fanjifana angovo. Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. dia mamokatra sy mivarotra takelaka firaka vita amin'ny aliminioma, mombamomba ny firaka aliminioma ary ny ampahany amina alimo ho an'ny sambo. Ny mpanjifa vaovao sy taloha dia raisina an-tanan-droa mba hijery sy handamina.
Indostrian'ny herin'ny rivotra
Ny ampahany amin'ny firafitry ny aliminioma dia be mpampiasa amin'ny sehatra maro noho ny antony toy ny tanjaka mekanika tsara sy ny lanja maivana; Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. dia mamokatra ampahany amin'ny aliminioma ho an'ny indostrian'ny herin'ny rivotra, izay nahazo fiderana iraisan'ny mpanjifa. Ny R&D sy ny mpamorona ny orinasa dia manana traikefa momba ny tetikasa sy fahalalana manome ny mpanjifa vahaolana famolavolana tsara kokoa.
Androany, rehefa miha malaza hatrany ny olana toy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sakafo dia misy fironana miharihary ny fanoloana paleta hazo, paleta plastika ary paleta vy amin'ny paleta aluminium amin'ny sehatry ny indostrian'ny sakafo, fitsaboana, fidiovana ary simika. Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. dia nandinika sy namolavola alimo nandritra ny taona maro. Ny traikefa ara-teknikan'ny palety firaka, ISO9001: 2015 fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao, ISO45001: fanamarinana ny rafitra fitantanana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny asa, ISO14001: 2015 ny mari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana, ny taratasy fanamarinana momba ny patanty modely, ny fanamarinana ny orinasa SGS, sns.
Ny boaty mangatsiaka firaka vita amin'ny alimina dia novolavolain'i Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. vita amin'ny takelaka aluminium sy mombamomba ny aliminioma. Izy io dia manana tombony amin'ny androm-piainana maharitra, ny vokatra azo avy amin'ny famindrana hafanana ary ny hafainganana haingana. Io dia ankatoavin'ny orinasa lehibe eto an-toerana sy any ivelany. Nahazo laza tsara izy io. Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanodinana mivaingana toy ny vokatra anaty rano, hazandranomasina, vokatra hena, vokatra fambolena sy sisin-tany ary sakafo mangatsiaka haingana.
Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. dia manome ny mpanjifa ny piraofilina aliminioma sy ny ampahany vita amin'ny firaka aliminioma izay derain'ny mpanjifa hatrany. Ny mpiasa ara-teknika dia tsy manana traikefa manan-karena sy fahalalana voarindra ihany, ary manambatra fitaovana famolavolana fanampiana amin'ny solosaina mba hamaritana vahaolana tsara ho an'ny filan'ny mpampiasa samihafa, ary hahatsapa ny fitambaran'ny kalitao sy ny toekarena.
Ny talantalana fambolena alimo alimina dia manolotra karazana teknolojia eropeana tanteraka. Raha jerena ny fampiasana an-trano an'ity vokatra ity dia nanao fanatsarana sy fanavaozana lehibe tamin'ny haitao tany am-boalohany ny orinasanay. Ny trano holatra iray manontolo dia vita amin'ny mombamomba ny alimo aluminium, izay mahafeno ny fenitry ny fifehezana famokarana mandeha ho azy tanteraka ary nahatratra ny sehatra iraisam-pirenena. ISO9001: fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao 2015, ISO45001: fanamarinana ny rafitra fitantanana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny asa, ISO14001: 2015 ny mari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana tontolo iainana, ny taratasy fanamarinana momba ny patanty modely, ny fanamarinana ny orinasa SGS, sns.
Ny mpiasa teknikan'ny Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. dia tsy vitan'ny manana traikefa momba ny tetikasa manan-karena sy fahalalana ny rafitra, ary manambatra fitaovana famolavolana fanampiana amin'ny solosaina mba hamaritana vahaolana tsara ho an'ny filan'ny mpampiasa samihafa hahatratrarana ny kalitaon'ny kalitao sy ny toekarena. Ny orinasa dia manana fanamarinana rafitra fitantanana isan-karazany mba hiantohana ny kalitao; ISO9001: fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao 2015, ISO45001: fanamarinana ny rafitra fitantanana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny asa, ISO14001: 2015 ny mari-pahaizana momba ny fitantanana ny tontolo iainana, ny mari-pahaizana momba ny patanty modely, ny fanamarinana ny orinasa SGS, sns.
No. 1, Lutai Industrial Park, Fangcun Town, Distrikan'i Tongshan, Xuzhou, Jiangsu, Sina